Anụ ọhịa & Mgbagwoju anya: edemede – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
N'ime 2038, mmetụta tidal nke anyanwụ na Ụwa gbanwere na mberede. Ndị agha mmiri na-abawanye ụba na-eme ka mgbawa miri emi dị n'ime ụwa nke na-eduga na isi ya, na-ekpughe ihe nzuzo ndị a na-achọghị iru ìhè nke ụbọchị…
Nnukwu anụ malitere ịwụpụ n'ala. Ụjọ, egwu, na onyinyo nke ọnwụ kpuchiri ụwa dum. Obodo ọ bụla jikọtara ọnụ wee malite mwakpo nkwonkwo megide iyi egwu ọhụrụ a, ma agbụrụ mmadụ dị ka ndị na-enweghị ike imegide ebili mmiri na-adịghị agwụ agwụ nke nnukwu anụ mmiri.
N'oge awa ikpeazụ nke mmadụ, oké uja miri emi di ike si kwa n'ebe ọ bula puta, na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ndị nwoke ma nnukwu anụ. Ndi kpara anụ ọhịa kpọtere n'ezie?
Ihe omimi na-echere ka ikpughe!
Atụmatụ + AKWỤKWỌ-3
– Dozie mgbagwoju anya iji merie nnukwu anụ mmiri.
– Were atụmatụ na usoro ejikere onwe gị.
– Nchikota nke usoro agha egwuregwu na egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya.
– Wulite ndị agha nke gị ma were ndị dike.
– Zụlite nnukwu anụ ọhịa iji bulie ike gị.
– Bulienu usu-ndi-agha di ike, gi na anu-ulo-unu buso-kwa-nu agha;.
– Nweta ndị dike ma wuo otu ndị ọkachamara maka nyocha.
– Ndị dike bụ akụ bara uru iji nyere gị aka na agha dị n'ihu.
– Soro ndị enyi gị na-alụ ọgụ. Soro ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile kparịta ụka!
– Enyemaka njikọta nwere ike mee ka owuwu ntọala gị dị ngwa.
– Kpọkọtanụ ndị mmekọ iji merie ndị iro.
– Mmekọrịta adịghị ike na-eri anụ ndị siri ike. Ị ga-alụ ọgụ ma ọ bụ nyefee?
Soro anyị na Facebook ka ị nweta akụkọ na mmemme anyị kachasị ọhụrụ! https://www.facebook.com/BeastsPuzzles
Anụ ọhịa & Puzzles is a free-to-play mobile game with in-app purchases. Dịka usoro ojiji na amụma nzuzo siri dị, Ezubere ngwa a maka ndị ọrụ na-erubeghị afọ 12. Achọrọ ngwaọrụ nwere ịntanetị.
Ị chọrọ enyemaka? Anyị na-enye aka na nsogbu ọ bụla metụtara egwuregwu ahụ! Enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na ụlọ ahịa ndị ahịa egwuregwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na:
amụma nzuzo: http://static-sites.allstarunion.com/privacy.html
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: edemede, Anụ ọhịa, CheatsHack, Mgbagwoju anya
← Agwaetiti ọhịa : Ndị aghụghọ egwuregwu izu ike&Mbanye anataghị ikike Ndị uwe ojii 3D – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →